Impilo noThando yizinto ezimbili ezibaluleke kakhulu empilweni yakho. Futhi kuthiwani uma uthola lezi zinto ezimbili ezingutsheni zethu? Yebo, uzwe kahleUthando lwezithandani Sweatshirts ngawe ukukwenza uphile ngokwengeziwe, ube nesitayela ngokwengeziwe, nokuningi kuThando. Iningi lemibhangqwana lithanda ukwenza izinto ezihlanyayo ezahlukene ndawonye. Okwamanje, ukuhlala nomuntu omthandayo kubalulekile ngoba Uthando luhlala likunikeza induduzo nenjabulo.
Uma ukhathele ukugqoka izingubo ezilula nezansuku zonke futhi ufuna ukufaka inhlansi ezingutsheni zakho, izingubo ezifanayo ezifana ne- Pizza Ukuqondanisa Hoodies ingeyakho.
Uthando umuzwa onamandla kakhulu emhlabeni; yisizathu esenza abantu bahlale ndawonye. Ukuthanda umuntu ngaphandle kokuveza imizwa yakho akukhuthazwa; uthando ludinga ukubonakaliswa. Abantu bahlala befuna indlela yokukhombisa uthando lwabo kwabalingani babo
Ubudlelwano bendoda nenkosikazi budinga kakhulu emhlabeni. Kulobu budlelwano, bobabili abalingani kufanele basebenze kanzima ukuze buqine futhi buqhubeke. Kufanele wenze izinto ezihlukile ukwenza ubudlelwano bakho buhlale isikhathi eside. Akunandaba ukuthi uneminyaka emingaki yobudlelwano bakho, idinga ukunakekelwa nothando.
Ukwethula izipho ngezikhathi ezahlukahlukene kumyeni noma unkosikazi wakho kuyindlela ethandekayo futhi elula yokwenza ubuhlobo bakho buqine. Uma sikhuluma ngezipho, sisho into emele uthando nemizwa yethu ngokuphelele. Mayelana nalokhu, ukufaniswa kwezingubo kungaba yisipho esikhethekile sabashadikazi bakho.
Ukuveza uthando lwakho nokwenza umlingani wakho azizwe ekhethekile kuyadingeka kakhulu njengokumthanda. Uthando luyinto ebalulekile kubo bonke ubuhlobo.
Kunezindlela eziningi ezahlukahlukene zokuveza uthando lwakho. Ukwethula isipho kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokutshela oshade naye ukuthi umthanda kangakanani futhi uyamkhathalela.
Izingubo zokufanisa zihlala zingumthombo omuhle wenjabulo, ikakhulukazi emibhangqwaneni. Abantu bathanda ukugqoka izimpahla ezifanayo njengezikibha, amaSweatshirts, amaHoodies, namajuzi ngezikhathi ezahlukahlukene. Ngalezi zingubo, awukwazi ukudlulisa kuphela imiyalezo eminingi nothando kwabashadikazi bakho, kepha futhi ungatshela abanye ngothando lwakho.
Izingubo zokufanisa izithandani yizona ezingubo ezinhle kakhulu ezitholakalayo namuhla ngoba lezi zingubo zisiza imibhangqwana ukuba ibungaze uthando lwayo. Izingubo ezinjalo zivame ukuba nezihloko ezithile eziphrintiwe kuzo. Lezi zihloko kungaba isihloko seNkosi neNdlovukazi, i-Together Since, ne-Mr and Mrs. Imibhangqwana eshadile iyathanda ukubizwa ngeziqu zikaMnu noNkk.Umshado ubudlelwano bokuzibophezela okuqinile nothando. Lezi zinto ezimbili ziyadingeka ebudlelwaneni obujabulisayo bomshado. Lobu budlelwano mhlawumbe buhle kakhulu emhlabeni. Lobu budlelwano busetshenziselwa ukugujwa kusukela ngosuku lokuqala. Iziqu zikaMnu noNkk zingabamele bangempela lobu budlelwano.
Uma uzizwa unesithukuthezi ngezingubo zokuzivocavoca ezivamile futhi ufuna ukufaka isitayela esithile futhi uvuse ubudlelwano bakho ngezingubo zakho, UMnu noNkk Sweatshirts ingeyakho.
Lawa maSweatshirts azokusebenzela njengenchazelo ecacile yothando lwakho nobudlelwano. Ungazisebenzisa lezi zingubo kusithombe sakho sangemuva komshado. Iziketi zethu zesitayela zizosiza abanye ukuthi baqonde ubudlelwane bakho.
Senze lawa ma-Sweatshirts ngo-100% wekhwalithi ephezulu ukukwenza uzizwe ukhululekile futhi unesitayela ngomkhiqizo owodwa kuphela.
Ephaketheni elilodwa, uzothola ama-sweatshirt amabili anesihloko esithi Mnu noNkk.
Uzothola isaphulelo se-14% kulawa ma-Sweatshirts Wokufanisa Izithandani.
Ukuqina kabili entanyeni, emikhonweni, nangaphansi kuzokwenza ingubo yakho iguquguquke.
AmaSweatshirts ethu ayatholakala ngemibala emihlanu ehlukene, omhlophe, oMnyama, oMpunga, owaseManzini, oBomvu.
Osayizi abahlukahlukene bayatholakala ukwenza uzizwe ukhululekile ngenkathi ukhetha okukodwa.
Kungani uthenga kithi.
Singumkhiqizo othenjiwe online okukunikeza izingubo ezenelisayo emnyango wakho.
Izinga lomkhiqizo liza kuqala.
Siyayikhathalela imizwa yekhasimende lethu ehambisana nezingubo.
Ngabe uhlela ukuya ku-honeymoon noma ohambweni lwasebusika? LeziHubby Wifey Hoodies ingeyakho. Lezi zinhlayiya ngeke zikwenze isitayela kuphela kepha zizotshela nabanye ngobudlelwano bakho. Izihloko zikaHubby noWifey kulezi ziHoodies zizokhombisa abanye uthando olujulile kanye namakhemikhali ebudlelwaneni bakho. Ngokuhamba kwesikhathi iningi labantu liyakhohlwa ukuveza uthando nothando. Ngasikhathi sinye, lobu budlelwano budinga ukuzikhandla okukhulu nokuzinikela ukuze buqine.Izinzuzo zeHubby wifey Hoodies.
Uma usanda kushada futhi ufuna ukugubha ubuhlobo bakho obusha, lapho-ke ungagqoka lezi zingubo.
Ungagqoka lezi zingubo njengesimemezelo esicacile sobudlelwano bakho phambi kwabanye.
Lawa ma-hoodies angaba yisipho esihle sosuku lwakho noma lokukhumbula abangani bakho.
Ngesikhathi sakho se-honeymoon ezindaweni ezinamagquma, lezi hoodies zizokugcina ufudumele kepha uhlelekile.
Ephaketheni elilodwa lama-hoodies, kuzoba nama-hoodi amabili: uHubby noyedwa onesihloko esithi WIFEY.
Indwangu yama-hoodies ingu-100% ukotini osezingeni eliphakeme.
Intamo eyindilinga ene-hood izogcina ikhanda lakho kubanda.
Amaphakethe angaphambili e-Roomy ngeke agcine isandla sakho emakhazeni kuphela kodwa futhi azogcina nezinto zakho eziyigugu.
Imibala ehlukene iyatholakala.
Sine anhlobonhlobo imibala e yethu Hubby Wifey Hoodies.
Ungakhetha umbala we-hoodies yakho oyithandayo.
Ubukhulu obuhlukahlukene buyatholakala.
Kwesinye isikhathi kufanele sishiye ingubo yethu esiyithandayo ngenxa yokungatholakali kosayizi.
Kepha senze bonke osayizi batholakale ukuze amakhasimende ethu abalulekile angakhathazeki ngosayizi.
Asikwazi ukukuveza ngokugcwele incazelo yegama elithi '' UTHANDO ''. Kungumzwelo onamandla ongazwakala kuphela.
Yize ingekho inkathi ethile yokuveza nokugubha uthando, sigubha usuku lwezithandani njengosuku lothando minyaka yonke. Imibhangqwana isebenzisa ukwethula izipho ezahlukahlukene kwabashade nabo. Wonke umuntu ufuna ukunikeza isipho esiyingqayizivele nesothando futhi achaze uthando lwakhe ngomuntu amthandayo. Kunezipho eziningi ezitholakalayo zemibhangqwana emangalisayo neyothando, kepha izipho ezithokozisa kakhulu ezitholakala lapho kukhona izingubo ezifanayo.
Indlu ibizwa ngokuthi umbuso, lapho owesifazane eyiNdlovukazi, futhi indoda iyinkosi.
Ebudlelwaneni, kubalulekile ukwenza oshade naye azizwe ekhethekile. Kunezindlela eziningi ongenza ngazo oshade naye azizwe ekhethekile futhi ethandwa. Ungaletha izipho ngezikhathi ezahlukahlukene; ungabiza oshade naye ngamagama ahlukene anjengethi My Love, Honey, My King, My Queen, njll.
Mhlawumbe "uthando" lungezinye zezizathu zokuba khona kwale ndawo yonke. Ukuthanda nokuthandwa umuzwa omuhle kakhulu futhi omuhle kakhulu kulo mhlaba. Kungumzwelo oyisisekelo kubo bonke ubudlelwano, noma ngabe ngumzali nenzalo noma ubuhlobo bendoda nowesifazane. Isikhathi esiningi, sicabanga ukuthi ukuthanda umuntu nje kwanele ebudlelwaneni.
Lapho imibhangqwana ithi ifuna ukuthola isikibha esenziwe ngendlela oyifisayo, basuke bekhuluma ngesikibha seholide, isikhathi sabo sangemva komshado, isikhumbuzo, noma usuku lwezithandani. Umkhuba wokwenza ngokwezifiso uthola ukuthandwa usuku nosuku. Kungakho isikibha sethu sePizza Couple siyisinqumo esingcono kakhulu somcimbi wakho. Lezi zikibha ezisezingeni eliphakeme zizokwengeza injabulo kumzuzu wakho wothando.
Ungenza ngezifiso isikibha esithandanayo ngokomcimbi wakho. Ungenza ngezifiso izikibha zakho njengesikibha sezithandani zothando, ndawonye selokhu, uHubby Wifey, inkosi nendlovukazi, nesikibha sikamnu.
Indoda nenkosikazi babizwa ngokuthi yingxenye engcono yomunye nomunye.
Ubudlelwano bendoda nenkosikazi buyisibopho esihlonishwa kakhulu emhlabeni. Sonke singathanda ukushada nomuntu esimthanda kakhulu futhi sifuna ukuchitha impilo yakhe yonke naye. Kepha ngemuva kwesikhathi esithile sisemshadweni, iningi lethu liyakhohlwa ukubonakaliswa ngothando nokunakekela. Yilapho-ke lapho ukuthambekela kwezingubo ezifanayo kusisiza ukuthi sibonise uthando lwethu phambi koshade naye nakwabanye.
Uma sikhuluma ngezimpahla ezifanayo, sisho izingubo ezinemidwebo ethile ephrintiwe kuzo. Imidwebo ethandwa kakhulu kulezi zingubo ngu '' Uthando '', '' Umyeni Wifey '', '' Inkosi neNdlovukazi ''.
Lapha sinomkhiqizo omuhle kakhulu ohlwini lwethu, okungukuthi, Izikibha ze-Couple Hubby Wifey. Le ngubo ingasetshenziswa futhi ukumemezela ubudlelwano bakho nothandekayo wakho.
Uma usanda kushada futhi uye ku-honeymoon noshade naye futhi ufuna ukufaka isitayela ezingutsheni zakho zangemva komshado, lezi zikibha zezithandani zingabakho.
Ephakethe lezikibha ezimbili, uzothola umkhiqizo wekhwalithi ephezulu ongu-100%. Inhloso yethu akuyona nje ukukunikeza ingubo yesitayela kodwa futhi nokukwenza uzizwe ukhululekile.
Ngoba ikhompyutha ibheka imibala yama T-shirts okuqala ingahluka ezithombeni.
Ithimba lethu lenze yonke imizamo yokukusebenzela ngokhuni wekhwalithi ephezulu ongu-100% Izikibha ze-Couple Hubby Wifey. Izinga lomkhiqizo nemidwebo ephrintiwe kulo mkhiqizo izokumangaza.